Hadafku wuxuu noqonayaa mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan Dunida, Dubai
Ujeedo inaad noqotid mid ka mid ah magaalooyinka ugu mustaqbalka ee adduunka
Toban Toban Raadin Meeleyn Raadinta Shaqooyinka ee Dubai
Waxaa laga yaabaa 22, 2019
Published by Shirkadda Dubai City at Waxaa laga yaabaa 22, 2019
Qorshe mustaqbal kasta waxay noqon kartaa geedi socod farsamo iyo mid maamul daneeya daryeelka dadka, xakameynta isticmaalka dhulka, qaabeynta jawiga magaalada oo ay kujiraan gaadiid iyo shabakadaha isgaarsiinta, iyo ilaalinta iyo xoojinta deegaanka dabiiciga ah iyagoo siinaya fursad dhab ah oo ay ku ciyaaraan door muhiim ah qaabaynta meelaha iyo degaanada daafaha dunida.
Waa muhiim in taas la ogaado waddamada adduunka qaarkood waxay bilaabeen qorsheyaal loogu talagalay in la dhiso magaalooyin caqli badan oo isticmaali kara teknolojiyad si ay uga caawiso abuurista ilo Is dhexgalka isbadalka nolol wanaagsan deegaanka adduunka, si loo horumariyo loona horumariyo heerka nololeed ee mustaqbalka iyadoo la adeegsanayo dadaallo inay magaalooyinkeeda lahaato ka dhigaan xogtooda tirakoobka ee internetka iyadoo aan wax dhibaato ah dhicin.
Waa maxay magaalo caqli badan?
Magaalooyinka smart ee u adeegsan kara tikniyoolajiyadda qorsheynta mustaqbalka si ay gacan uga geystaan ​​abuuritaanka xaaladaha nolosha wanaagsan himilada dhismaha iyo teknolojiyada, sida cilmibaadhistu uga socoto biyaha, gaadiidka, dharka magaalada, iyo jawiga bada dhamaanteed iyadoo aragtida laga dhigaayo inay magaalada ka dhigto mid caqli leh mustaqbalka dhaw. Iyaga oo dhiirigelinaya kala-duwanaanta, astaamaha dhismaha, iyo muuqaalka farshaxanka leh ee dadka ka soo jeeda asal kaladuwan ayaa iskugu soo ururi doona magaalada dhaqamadooduna si wanaagsan ayey isugu dhex qasan doonaan. Sidoo kale, astaamaha qaab dhismeed ee magaalada ayaa sii kacaya in la horumariyo in ka badan meel kasta oo adduunka ka ah.
Dhibcaha: Smart Dubai https://2021.smartdubai.ae/
Guri kasta oo lagu rakibo nidaamka teleefonka ee loo isticmaali doono in lagu bixiyo shirar muuqaal ah iyo sidoo kale soo diraa macluumaadka dadka magaalada deggan, reerka ugu yaraan ugu yaraan hal robot dhamaadka 2020, xarunta qalliinka halkaas oo tikniyoolajiyaddu ay ka caawin karto magaalada inay heegan ahaato oo ay diyaariso markay musiibo dabiici ahi dhacdo. Tan kaliya maaha, laakiin nidaamku wuxuu sidoo kale saadaalin doonaa cimilada, daadadka, iyo aafooyinka kale ee dabiiciga ah xitaa maalmo ka hor wakhtigaas.
Istaraatiijiyada Smart City
Gaaritaan Waara rajooyinka ganacsiga, halkaasoo ay jiri doonaan barnaamijyo amni oo kufilan oo lagu ogaanayo & feejignaanta masuuliyiinta, joogitaanka tikniyoolajiyada webka ee caqliga badan sida Advancecities.com, dawladuhu waxay sii wadi karaan inay sii wadaan iyagoo ku rakibaya Bandhigga Muuqaalka Muuqaalka ee Xarunta Dhexe ee loo isticmaali karo inay ogaadaan iyo ogaadaan tayada hawada iyo sidoo kale kormeerka tayada nidaamka gaadiidka ee magaalada, si ay u noqoto ugu dhaqsaha badan adduunka iyada oo ah meesha ugu dhaqsaha badan ee dhaqaale-aasaasiga ah, oo noqota mid ka mid ah xuduudaha teknoolojiyadda adduunka, eber-karbo sii waara magaalo ciriiri la'aan ah oo leh horumarin tikniyoolajiyadeed, qaab dhismeedka iyo gaadiidka mustaqbalka iyadoo loo duulayo baabuur
Wi-Fi bilaash ah oo ay weheliso qawaaniin adag oo ku saabsan qaab dhismeedka iyo dhowrista tamarta, inay noqoto magaalo loo dhiso inay ku tiirsanaato tamarta qoraxda iyo ilaha la cusboonaysiin karo, adkeysiga isbadelka cimilada adoo adeegsanaya IT si ay ula socdaan qiiqa hawada iyo sidoo kale waxay tilmaan ka bixiyaan arrimaha kale ee deegaanka sida baahida bullaacadda bulaacadaha iyo dayactirka.
Iyo mustaqbalkan cajiibka ah, abuur cusub - unug nool ayaa la sameeyay iyadoo la adeegsanayo gebi ahaanba-aadanaha ee sameeyay DNA. Waa tallaabo muhiim u ah cilmiga bayoolajiga iyo saynisyahannada abuurista hiddo-wadaha isku-darka afar jeer ka weyn oo aad uga adag kana badan nooc kasta oo hiddo-wadayaal ah oo ay horey u farsameeyeen -HyperBOla
Magaalooyinka smart sida Dubai iyo Abu Dhabi garaacista himilada Imaaraadka ee mustaqbalka. Marka, istaraatiijiyadda astaanta Dubai ee magaalada 'Smart City' ayaa isbeddelaysa qaabkii ay deggeneyaashii iyo dadka soo booqda waxay ku noolyihiin, shaqo iyo ciyaaro. Dubai oo dhinaca kale, ujeedkeedu yahay in uu noqdo mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan ee Dunida Aduunka by 2021.
Waxaan hadda bixinnaa wax wanaagsan hagayaal Loogu talagalay Shaqo ee Dubai. Kooxdayada ayaa go'aansaday in ay ku daraan macluumaadka luuqad kasta ee noo Shaqooyinka ku yaala Dubai. Marka, adiga oo tan maskaxda ku heysa, waxaad hadda heli kartaa tilmaamo, talooyin iyo shaqaalaynta Imaaraadka Carabta oo leh luqaddaada.